सुरई नदीमा पौडी खेल्दा तीन जनाको मृत्यु, अर्का एक बाँचे
तौलिहवा। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका २ मा पौडी खेल्नेक्रममा तीनजनाको डुबेर मृत्यु भएको छ । मंगलबार दिउँसो पौडी खेल्ने क्रममा हल्लानगरस्थित सुरई नदीको रहमा डुबेर तीनजनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा बिजयनगर गाउँपालिकाका अन्दाजी १६–१७ वर्षका आशिष भट्टराई, सोही ठाउँका…
काशीराम शर्मा बाँके। स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिएका कामका सम्बन्धमा अनियमित अख्तियारमा उजुरीको चाङ नै लागेको छ। तीन वटा जिल्ला हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा मात्रै चालू आव २०७५/७६ मा स्थानीय तहका ११६ वटा उजुरी दर्ता भएका…
वन विनास हुने गरी उद्योग स्थापन नगर्न सरकारलाई सुझाव
काठमाडौं। संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ। समितिको मंगलबारको बैठकमा वन विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको हो। छलफलमा भाग लिँदै वन विज्ञ डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले वन क्षेत्रमा वन विनाश हुने गरी उद्योग…
समता अस्पतालमा झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला
काठमाडौँ । बौद्धस्थित समता अस्पतालमा आज एक युवतीको शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ। रामेछाप जिल्ला दोरम्बा घर भएकी सोही अस्पतालमा क्लिनरको काम गर्ने २७ वर्षीया विमला तामाङ अस्पतालमै झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्। मृत फेला…
उफ् कस्ताे गर्मी ! सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किन छाडे
नीरा गौतम, पवित्रा घिमिरे र जनक श्रेष्ठ रुपन्देही। अत्यधिक गर्मीका कारण रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। विगत एक सातादेखि तापक्रम बढेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको हो। वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्धि भएसँगै सर्वसाधारण घरबाहिर निस्किन छाडेकाले बजारमा चहलपहल कम देखिएको छ। गर्मीका कारण…
खानेपानी योजनाबाट खोटाङ याम्खाका ८४ घर लाभान्वित
खोटाङ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खास्थित रातमाटामा सञ्चालन गरिएको खानेपानी योजनाबाट ८४ घर उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन गरिएको रु ३२ लाख ५० हजार र उपभोक्ताको रु सात लाख ७८ हजार ४८६ को जनश्रमदान गरी…
चितवनको इच्छाकामनामा बाल संरक्षणगृह निर्माण
काठमाडौ । चितवनको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामनामा बाल संरक्षणगृह सञ्चालन गरिने भएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका–४ कुरिनटारमा बाल संरक्षणगृहका लागि भवन निर्माणकार्य भइरहेको वडाध्यक्ष होमबहादुर रानामगरले जानकारी दिए। रु १४ लाखको लागतमा निर्माण गरिने बाल संरक्षणगृहमा वडाभित्र रहेका बाबुआमा नरहेका बालबालिका, उच्च…
लुक्ला। तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा चार दिनदेखि उडान नहुँदा यात्रु अलपत्र परेका छन्। मौसम प्रतिकूल हुँदा चार दिनदेखि कुनै पनि उडान तथा अवतरण हुननसकेको लुक्ला विमानस्थलका निमित्त प्रमुख प्रविन श्रेष्ठले जानकारी दिए। बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लाग्ने तथा हल्का वर्षासमेत हुने…
शिक्षकको कुटाईबाट सर्लाहीमा छ जना विद्यार्थी घाइते
सर्लाही । सर्लाहीमा पनि शिक्षकको कुटाइबाट ६ जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका १ हजरियास्थित बागमती सामुदायक विद्यालयका कक्षा १ देखि ३ कक्षासम्म अध्यन गर्ने विद्यार्थीलार्इ सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक महेन्द्रप्रसाद रायले कुटपिट गरी घाइते भएका हुन्। रायले विद्यार्थीलाई…
जब उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे ‘पेटानी’मा सजिइन्
उर्लाबारी । मानिसहरुको खचाखच उपस्थिति अनि चहलपहल, भब्य साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना । अवसर थियो, धिमाल जातिको महान पर्व सिर्जात अर्थात जात्रिको समापन । कार्यक्रमको प्रमुख अथिति थिईन्, प्रतिनिधी सभाका उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फे। कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तुम्बाहाम्फे सदा झैँ आफ्नै…